करकै सकस ! | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण करकै सकस !
on: २९ श्रावण २०७५, मंगलवार ०६:३९ लेख | दृष्टिकोण
करकै सकस !
यतिखेर देश गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा रहेको भनिए पनि तिनका प्रारम्भिक अभ्यास भने जनमुखी र लोकलाई रिझाउनेभन्दा पनि चिढाउने खालको देखिन थालेको छ । यो शुभ बिहानीको सङ्केत होइन । दुई तिहाइको सरकार भनिएको छ । त्यसमा पनि वामपन्थीको सरकार छ, जसको अभीष्ट नै निम्न वर्गको खुशी ल्याउनु हो । तर, सरकारले लय समाउनमा भन्दा पनि आफै कक्रिन थालेको देखिन्छ । सङ्घीयताले समृद्धि र खुशी नै खुशी ल्याउने भनिएकै हो, भनिँदै छ पनि । तर, आधा वर्ष बित्दा पनि त्यसको कुनै झलक अनुभूत हुनसकेको छैन । यतिखेर केन्द्र र प्रदेश अनि स्थानीय सरकारहरू परस्परमा बखेडा झिक्नमा व्यस्त मात्र छैनन्, ती कताकता अलमलिएका पो हुन् कि झै लाग्छ । सबैभन्दा ठूलो सकसचाहिँ अहिले आम नागरिकमा थोपरिन थालेको करको भार नै हो । स्थानीय सरकारहरूले मनलागि ढङ्गले कर थोपर्न थालेका छन् । यस्तो लाग्छ, सङ्घीयता भनेकै उनीहरूले जे गर्न पनि पाइन्छ भन्ने मात्र बुझेका छन् ।
हो, स्थानीय निकाय चलाउन निश्चय नै स्रोत र साधनको आवश्यकता पर्छ । तर, यसको अर्थ यो होइन कि त्यसको बन्दोबस्तचाहिँ स्थानीय/आमनागरिकले करबाटै भर्र्नुपर्छ । यस्तो मानसिकता हो भने भोलिका दिनमा सङ्घीयता चाहिन्छ भनेर हिजो लड्ने आम नागरिक नै भोलि त्यसको विरोधमा सडकमा उत्रिए भने अनौठो नमाने हुन्छ । अहिले सकसचाहिँ करकै हो । केन्द्र/सङ्घीय सरकारले दोहोरो कर तिर्न नपर्ने भने पनि अहिले आम नागरिकले तेहोरो चौहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पानीको कर, साइकलको कर, गाडी गुडाएबापतको कर, गाडी पार्किङ कर, गाडी कर, घरको कर, कति हो कति नयाँ करको भार देखिएकै छ । नागरिकता सिफारिश, बसाइँसराइ, जन्ममृत्यु दर्ता, विपन्न/आदिवासी/दलित/जनजाति आदिको सिफारिश दस्तुर पनि दशौं गुणाले बढाउन थालिएको छ । साइकल चलाउनेलाई कर लिनु भनेको आठौं आश्चर्य नै हो । हुन के पर्थ्यो भने प्रदूषण कम गर्नमा सहायक हुने साइकल चलाउने वातावरण बनाएर बरु कार्यालयमा आवतजावत गर्न कर्मचारीहरूलाई साइकलमैत्री अभियानमा होम्न सक्नुपर्थ्यो र तिनका लागि साइकल सापटी निर्ब्याजी दिने व्यवस्था हुनुपर्थ्यो । सडकमा साइकल लेनको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । यूरोपतिर यो काम गरेकै छन् । अहिले पानीका ट्याङ्करहरूले स्थानीय निकायपिच्छे कर तिर्नुपर्ने भएको छ । जस्तै काठमाण्डौं शहरकाले प्रयोग गर्ने त्यस्तो पानीको तीनदेखि चारओटा स्थानीय निकायमा कर बुझाएर मात्र पानी भित्र्याउन सक्ने अवस्था आएको छ । यसको अर्थ हो, २ हजारमा आउने पानीको ट्याङ्करले तीन/चार स्थानीय निकायमा थप कर तिर्दै आउँदा सो पानीको थप ९ सय (प्रतिट्याङ्कर औसत तीन सयले) कर बुझाउनुपर्ने स्थिति छ । यो भनेको पानीमा ४५ प्रतिशतको कर हो । अब यो एकपटक होइन, एउटा सामान्य चार पाँच जना सदस्य भएको परिवारले महीनामा केही नभए पनि दुई/तीनपटक पानी खरीद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको वर्षमा छत्तीसपटक तेस्तो कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । झट्ट हेर्दा यो केहीजस्तो नदेखिए पनि के नागरिकले एउटा पानी किनेर खानलाई पनि करको भारले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिनुपर्ने ? पानी त सरकारले सके घरघरमा नसके पनि समूहमा धारामार्फत वितरण गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर, उपत्यकामा ३० वर्ष बित्न लाग्दा पनि अझै मेलम्चीको सपना साकार हुनसक्ने छाँट छैन । त्यसैले अहिलेको यो खाले करको भारले अझै कति वर्षसम्म थिच्ने हो भन्न सकिन्न । भोलि काठमाडौं उपत्यकावासीले भूमिगत जलस्रोतको दोहन गरेबापत कुनै कर नलिइएला भन्ने र फोहोर उत्सर्जनको पनि कर नलाग्ला भन्न सकिन्न । त्यसो त अहिले पनि फोहोर उठाउने निजी कम्पनी/वातावरणका गैरसरकारी संस्थाहरूले फोहोर सङ्कलन गरेबापत मासिक ३ सयदेखि ५ सयसम्म दस्तुर उठाएकै छन् । त्यो पनि एकखालको करै हो । अब त्यसमा कुनै दिन नगरपालिकाले भ्याट लियो भने पनि कुनै अचम्म नमान्दा हुन्छ । कुनै बेला हामीले नगरपालिका/महानगरपालिकाको प्रमुख काममध्ये नगरभित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्नु पनि हो भनेर पढेका थियौं । सो गरेबापत पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु बिडम्वनै हो ।
विकास र समृद्धिको अनुभूति पहिले हुनसक्यो भने मात्र नागरिकहरू कर तिर्न उत्सुक होलान् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, खानेपानी, बिजुली बत्ती (सोलार नै सही), ग्यास/इन्धन, सार्वजनिक यातायात, सिँचाइ, अन्न भण्डारण र तिनको उचित बजार व्यवस्था, कृषि ऋण आदिमा सहज र सरल तरीकाले पहुँच र रोजगारी हुनसक्यो भने कर तिर्न नागरिक स्वतः उत्प्रेरित हुन्छन् । तर, ती सेवाको कुनै अनुभूतिसम्म पनि नहुने अवस्थामा ढाडै सेक्ने गरी करमाथि कर मात्र थोपरिए कुनै पनि हालतमा उचित हुन्न । प्रविधिसितको नागरिकको सरल पहुँच ( इण्टरनेट) हुने कुरालाई पनि भ्याटले थिच्न थालेको छ ।
कर मात्र साधनको विकल्प होइन । पहिले स्थानीय पूर्वाधारहरूमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ । आम नागरिकले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । पहिले अस्थिर सरकारले विकास र समृद्धि दिन सकेन भनेर आम नागरिकले यसपटक बहुमतकै सरकार दिएको पनि हो । त्यतिले नपुगेर दलीय विलयनपछि त अहिले सरकार दुई तिहाइकै आकारको छ । त्यसले स्थायी सरकार त दियो तर दम्भले ग्रस्त पारेर सतह नदेख्नेतिर सरकार लाग्दै छ कि भन्ने भ्रम छाउन थालेको छ । के सङ्घीयता यतिकै लागि हो त ? के लोकतन्त्र/गणतन्त्र यतिकै लागि हो त ? करको सकसले सङ्घीयतालाई कतातिर लैजाने हो, बेलैमा विचार गरिएन भने सङ्घीयताविरुद्ध आवाज उठाउनेहरूले कलिलो सङ्घीयतालाई नै अप्ठ्यारो स्थितिमा नलैजालान् भन्न सकिन्न । स्थानीय सरकार/प्रदेश सरकारहरूको करलाई सङ्घीय करसितै आबद्ध गरेर लैजाने नीति वा जहाँ कर तिरे पनि आम नागरिकले एउटा मात्र कर तिरेको अनुभूति दिने काम सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ । कर निर्धारणमा बेलगामजस्तो गरेर स्थानीय/प्रदेश सरकारहरू हिँड्न थाल्ने हो भने भोलि करको अवज्ञा पनि हुन बेर लाग्दैन । वीरगञ्जमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ नै आन्दोलित भएर सडक गुहार्नु पुगेजस्तै देशभर नहोला भन्न सकिन्न । सङ्घीय सरकारले कमसे कम यो गणतन्त्र कार्यान्वयनको पहिलो ५ वर्षसम्म आफैले स्थानीय सरकारहरूलाई स्रोत दिने व्यवस्था गर्न सक्दैन ? नागरिकले नबुझेका हुन् कि सरकार भन्नेहरूले नबुझेका हुन् । तर, अहिले करको सकसचाहिँ यत्रतत्र अनुभूति भइरहेको छ । आनन्दले कर बुझाउने दिनचाहिँ कहिले आउला ?